January 8, 2022 - Channel Lover
January 8, 2022 by Channel Lover
ဒီယာဉ်မတော်တဆမှု ရုပ်သံကိုကြည့်ရပြီးတော့ ရယ်ရမလာ ၊ ငိုရမလား လို့တောင်မသိတော့ပါဘူး ။ ရယ်လိုက်ရင်ပဲ ကိုယ်ကပဲ မကောင်းတဲ့လူ ဖြစ်တော့မယ်လိုလိုပေါ့။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်က မီးပွိုင့်ရှိတဲ့လမ်းဆုံတစ်နေရာမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ ။ Video ထဲမှာတော့ အဆိုပါကား နှင့် စက်ဘီးတို့မှာ ဘေးချင်းကပ်ယှဉ်လျက်မောင်းနေပေမဲ့လည်း မီးပွိုင်တစ်နေရာ အရောက်မှာတော့ ကားကရုတ်တရက် မီးနီမိတယ်ဆိုပြီး ရပ်လိုက်ပါတယ် ။ ထိုအချိန်မှာတော့ စက်ဘီးသမားဟာ အတော်လေးကို အလျင်လိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးနှင့် အရှိန်ဖြင့်မောင်းနေခဲ့ကာ လမ်းတစ်ဖက်ကူးရန်အတွက် အနောက်သို့လှည့်ကြီးနောက် အရှေ့ပြန်လှည့်ချိန်မှာဘဲ အရှိန်နှင့်မောင်းနှင်လာသောစက်ဘီးက အရှိန်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ မီးပွိုင့်တွင်ရပ်ထားသောကား၏ အနောက်ဖက်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပြီး စက်ဘီးသမားမှာတော့ ကားမှာမျက်နှာ ကပ်လျက်ဖြင့်အောက်ဖက်သို့လျောကျသွားခဲ့ပါတယ် ။ြ ကည့်လိုက်တာနဲ့ အဆိုပါvideo ဟာ ဟာသနှောနေသလို ရယ်နေရပြီး ကြာချိန်မှာ 10 … Read more
မိကျောင်းတွေစားလို့ကျန်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ခေါင်းကို ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး ရှိက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေတဲ့ မိခင်
ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင် အင်မတန်ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်လေးကတော့ နှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးဟာ မီကျောင်းတွေမွေးမြူထားတဲ့ တွင်းထဲ ကျပြီး အရှင်လတ်လတ် မိကျောင်းစားတာ ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာဆိုရင်လည်း သမီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မိကျောင်းကန်ထဲကို ခုန်ဆင်းပြီး သမီးလေးကို ကယ်တင်ဖို့ကျိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် သူကယ်တင်ဖို့ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ မီကျောင်းတွေကိုက်စားလို့ သမီးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တစစီဖြစ်နေပြီး ဦးခေါင်းသာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လည်း မိကျောင်းတွေလက်ထဲက သမီးလေးရဲ့ခေါင်းကိုလုကာ အပေါ်ကိုရအောင်ပြန်တက်လာခဲ့ရပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်လည်း သူ့မျက်စိရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ သမီးလေးရဲ့ခေါင်းကို ကြည့်ပြီး ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်ကာ သတိမေ့မျောသွားမလိုတောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ သမီးခေါင်းကို ရင်မှာပိုက်ပြီး ရှိက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေတာကို မြင်ရရုံနဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း သူမရင်ထဲက ပူဆွေးသောကတွေကို မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ source – myanmarload.com … Read more
လိုအပ်လာလျင် တပ်မတော်နှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရန် တစ်ပါတီလုံးနှင့် ပါတီဝင်တိုင်းအသင့် ရှိသည်ဟု see more
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွင့်ဖြိုးရေးပါတီသည် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်ရန်ပေါ်ပေါက်လာသော ပါတီဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်လာလျင် တပ်မတော်နှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရန် တစ်ပါတီလုံးနှင့် ပါတီဝင်တိုင်းအသင့် ရှိသည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (ငြိမ်း)ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ပြောသည်။ “ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကရော ဘယ်လောက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလဲ။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်ဖို့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ ပါတီဝင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ။ အရေးပေါ်လို့ တပ်မတော်က လိုအပ်လာရင် ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးတပ်မတော်ထဲဝင်မှာလား။ ဒီထဲမှာ ပါတီဝင်တွေပါလား (ပါပါတယ်) ဝင်နိုင်လား (ဝင်နိုင်ပါတယ်) ဒါကျွန်တော်တို့အင်အားပါပဲ”ဟု ပြောသည်။ ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က နိုင်ငံတကာဖိအားများနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သည် အစိုးရ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အခြေခံဥပဒေတွင် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးကောင်စီရေးထားကြောင်း မိမိနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ရန်လိုကြောင်းလည်း ဆက်လက်ပြောသည် ။ “ကုလသမဂ္ဂ အတင်းဝင်လာကြရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အဲလိုအကြောင်းတရားတွေပေါ်လာရင် ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်အောင်ဆိုပြီး … Read more
ညီမလေး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပါညီမလေး
ညီမလေး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပါညီမလေး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်။ 1။စာတတ်တဲ့ယောက်ထက် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကိုသာရွေးချယ်ပါ ။တစ်မိုးအောက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ့ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို့သိပ်လိုအပ်တယ် ။ 2။ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရှိသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ကိုယ့်ဘဝတစ်သက်တာလုံး အနီးဆုံးမှာရှိနေမဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖေးမနိုင်သူဖြစ်ဖို့ သိပ်လိုအပ်ပါတယ် ။ 3) ငွေချမ်းသာသူထက် စိတ်ထားရိုးဖြောင့်သူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အေးအတူပူအမျှလက်တွဲထားရမဲ့သူဟာ၊ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုငွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရုံနဲ့ ၊မရဘူးဘယ်အရာမှာမဆို ပွင့်လင်းရိုးသားစွာနဲ့ ဆက်ဆံရေးကသာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အငြိုးကင်းစေတဲ့ လက်နက်ဖြစ်တယ် ။ 4။ဂုဏ်ရှိသူထက် ပြုံးရယ်နိုင်စေသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။လူ့ဘဝဆိုတာ ရေလှိုင်းလိုပဲ အနိမ့်အမြင့်ရှိတယ်ကိုယ့်အရိပ်အဖြစ်၊ခိုလှုံနေရသူဟာဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံလာပါစေမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးပြီး ပြုံးရယ်နိုင်စေသူဖြစ်ဖို့အဓိကကျတယ် ။ 5) ရုပ်ချောသူထက် အသိုင်းဝိုင်းသန့်ရှင်းသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။မတူညီတဲ့အသိုင်းဝိုင်းနှစ်ခု ပေါက်ဖွားလာသူတွေတစ်ဘဝအတူလက်တွဲပြီး၊တစ်မိုးအောက်ထဲနေဖို့ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ပါလာသလို နှစ်ဖက်အသိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းအိမ်ထောင်စုတစ်ခုရဲ့ တစ်စိပ်တစ်ဒေသမှာပါဝင်ပါတ်သက်စေပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘဝကို တစ်သက်တာပေးအပ်ထားရမဲ့သူဟာကိုယ်နှုတ်အမူအယာ ယဉ်ကျေးပြီးမိမိသိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတတ်သူဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ ။ 6) ဥစ္စာပြည့်စုံသူထက် နားလည်မှုရှိသူကိုသာရွေးချယ်ပါ … Read more
PDFတွေရဲ့ဘဝဟာ တိုက်ပွဲတိုက်ရမှ မဟုတ်… လမ်းသွားရင်းလည်း အသက်အန္တာရာယ်ထိခိုက်နိင်တယ်… လက်နက်စမ်းသပ်ရင်းလည်း အသက်ပေးရနိင်တယ်…. ဒဏ်ရာရသူတွေကို အကောင်းဆုံးကုသပေးနေပါတယ်…3Cobra PDF ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး မြန်မြန်သက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေ Credit unicode PDFတှရေဲ့ဘဝဟာ တိုကျပှဲတိုကျရမှ မဟုတျ… လမျးသှားရငျးလညျး အသကျအန်တာရာယျထိခိုကျနိငျတယျ… လကျနကျစမျးသပျရငျးလညျး အသကျပေးရနိငျတယျ…. ဒဏျရာရသူတှကေို အကောငျးဆုံးကုသပေးနပေါတယျ…3Cobra PDF ဆုတောငျးပေးကွပါအုံး မွနျမွနျသကျသာပြောကျကငျးကွပါစေ Credit PDFတွေရဲ့ဘဝဟာ တိုက်ပွဲတိုက်ရမှ မဟုတ်… လမ်းသွားရင်းလည်း အသက်အန္တာရာယ်ထိခိုက်နိင်တယ်… လက်နက်စမ်းသပ်ရင်းလည်း အသက်ပေးရနိင်တယ်…. ဒဏ်ရာရသူတွေကို အကောင်းဆုံးကုသပေးနေပါတယ်…3Cobra PDF ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး မြန်မြန်သက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေ Credit unicode PDFတှရေဲ့ဘဝဟာ တိုကျပှဲတိုကျရမှ မဟုတျ… လမျးသှားရငျးလညျး အသကျအန်တာရာယျထိခိုကျနိငျတယျ… လကျနကျစမျးသပျရငျးလညျး အသကျပေးရနိငျတယျ…. ဒဏျရာရသူတှကေို … Read more
လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ တင်လာခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ တင်လာခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ဖြူဖြူထွေး ကတော့ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးလေးတွေ နဲ့ကြော်ငြာတွေ ကို ရိုက်ကူးပြီးပရိသတ် အချစ်တွေကို ရယူ ထား နိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . ဖြူဖြူထွေး ကတော့ မိသားစု လိုက် ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းတွေ နဲ့အတူ အလှူ အတန်းတေ့ လည်း ရက်ရောတယ် ဆိုပြီးတော့ ပရိ သတ် များ ကလည်း ချစ်ပေး ခဲ့ကြပြန် ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်နေတဲ့ အချိန် ကာလ အတွင်း မှာတော့ ဖြူဖြူထွေး တစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ် သက်နေ ခဲ့ပြန်ပါ တယ်. . အနုပညာ ရှင်တော်တော် များများ လည်း တရားသော ဘက်နှင့် မတရားသောဘက်ကို … Read more
မပြောသင့်သော စကားတခွန်းကြောင့် ပရိတ်သတ်များရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား မြင့်မြတ်
မင်္ဂလာပါ ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေအခုလို နွေဦး ကာ လ အတွင်းမှာ အနုပညာရှင် တော်တော်များများ အ လုပ်မဖြစ်တော့ နားလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်လည်း အလားတူနားလိုက်ရပေမဲ့ မိန်းမရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ Online shopping မှာဝိုင်းကူ ရောင်းချရင်မြင့်မြတ်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံးကို ပရိတ်သတ် အားပေးမှု အမြောက် အများရခဲ့သလို Live လွင့်တဲ့ အချိန်ကို ထိုင်စောင့်ရသည် အထိ အား ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ January လအစမှာ အာဏာသိမ်းပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လူတိုင်း ရှေ့ထွက် ဆန္ဒပြခဲ့သလိူ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်လည်းဆန္ဒပြ ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ ။နောက်ပိုင်းမှာ ဘာ သတင်းမှ မကြားရတော့ပဲ သြင်္ကန်ကာလရောက်မှ စစ်တပ်မှ ပြုလုပ်တဲ့ သြင်္ကန်ပွဲကို တတ်ရောက်ခဲ့သည့် ပုံများနှင့် အတူ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ … Read more
ဗဟုသုတနဲတဲ့ပြည်သူတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီရဲအောင်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီရဲအောင်ကတော့ တပ်မတော်ထောက်ခံသူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူရွေးချယ်တဲ့လမ်းဟာဘယ်တော့မှမှားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲခံယူထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒိလိုခံယူချက်အပြည့်နဲ့ တပ်မတော်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်သူများနဲ့ရင်ဘတ်ခြင်းးမတူပဲကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီရဲအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုဗုံး-ခွဲခံရသည်အထိဖြစ်လာခဲ့တာလဲဖစ်ပါတယ် အခုချိန်မှာတော့အကယ်ဒမီရဲအောင်ဟာ တပ်မတော်ရဲ့စောင့်ရှောက်ပေးမှုနဲ့လုံခြံတဲ့နေရာတခုမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်နဲ့ပြည်သူတွေကို သိစေချင်လို့ဆိုကာသတိပေးစကားကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့က အရမ်းဗဟုသုတနဲလွန်းပါတယ် စာဖတ်အားလဲနဲတော့ဗဟုသုတနဲတာတော့မဆန်းပါဘူး သတင်းတွေကိုတွေ့ရာလူကတင်တယ် ယုံချင်တဲ့လူကယုံနေကြတာပါ ရှေးအစဉ်ပဆက်ထဲကရှိခဲ့တဲ့ MRTV တို့ မြဝတီသတင်းတို့ မြန်မာ့အလင်း တို့လိုသတင်းဌာနတွေက မှန်ကန်တိကျတဲ့သတင်းတွေတင်ပေးနေတာကို မယုံကြတာတော့ အတော်လေးစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ပြည်သူတွေဗဟုသုတများအောင်စာများများဖတ်ကြပါ လို့ ဖော်ပြထားတာကို ပြန်လည်ကူးယူမျှဝေလိုက်ရပါတယ် credit unicode ပရိတျသတျကွီးရေ အကယျဒမီရဲအောငျကတော့ တပျမတျောထောကျခံသူတယောကျဖွဈပွီးသူရှေးခယျြတဲ့လမျးဟာဘယျတော့မှမှားမှာမဟုတျဘူးလို့လဲခံယူထားသူတယောကျဖွဈပါတယျ အဲ့ဒိလိုခံယူခကျြအပွညျ့နဲ့ တပျမတျောကိုထောကျခံခဲ့တဲ့အတှကျ ပွညျသူမြားနဲ့ရငျဘတျခွငျးးမတူပဲကှဲပွားမှုတှဖွေဈလာခဲ့ပွီး အကယျဒမီရဲအောငျရဲ့နအေိမျကိုဗုံး-ခှဲခံရသညျအထိဖွဈလာခဲ့တာလဲဖဈပါတယျ အခုခြိနျမှာတော့အကယျဒမီရဲအောငျဟာ တပျမတျောရဲ့စောငျ့ရှောကျပေးမှုနဲ့လုံခွံတဲ့နရောတခုမှာရှိနခေဲ့တာဖွဈပွီး ပရိတျသတျနဲ့ပွညျသူတှကေို သိစခေငျြလို့ဆိုကာသတိပေးစကားကို အောကျဖျောပွပါအတိုငျးပွောကွားခဲ့ပါတယျ ပွညျသူတှအေနနေဲ့က အရမျးဗဟုသုတနဲလှနျးပါတယျ စာဖတျအားလဲနဲတော့ဗဟုသုတနဲတာတော့မဆနျးပါဘူး သတငျးတှကေိုတှရေ့ာလူကတငျတယျ ယုံခငျြတဲ့လူကယုံနကွေတာပါ ရှေးအစဉျပဆကျထဲကရှိခဲ့တဲ့ MRTV တို့ မွဝတီသတငျးတို့ မွနျမာ့အလငျး တို့လိုသတငျးဌာနတှကေ … Read more
ရန်ကုန်လမ်းမတော်ရဲစခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ စမ်းချောင်းတွင်လည်း ဗုံးကွဲ၊ အရှေ့ဒဂုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၁ ဦးသေပြီး ၁ ဦး အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရ
ရန်ကုန်လမ်းမတော်ရဲစခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ စမ်းချောင်းတွင်လည်း ဗုံးကွဲ၊ အရှေ့ဒဂုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၁ ဦးသေပြီး ၁ ဦး အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရ ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရန်ကုန်တိုင်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ဗုံးပေါက်ကွဲကြောင်း ဒေသခံများက ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီ ၃၀မိနစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ၁၃လမ်း လမ်း မတော်မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပွားကြောင်း ၊ အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် YGN (UG)ဖြစ်သည့် DARK SHADOW အဖွဲ့က လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ “လမ်းမတော်ရဲစခန်းမှာ ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီ ၃၀မိနစ်မှာ ဗုံးပေါက်ပါတယ်။ အသံလည်းအရမ်းကျယ်တယ်။ ရဲတွေ စခန်းမှာ … Read more
သူမတို့မင်္ဂလာဆေင်တုန်ုးက အမှတ်တရဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီး
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိထားတာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်ခဲ့ပါပြီနော်။ ယနေ့ချိန်ထိ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတိုင်းမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။နေမျိုးအောင်ကတော့ သာယာကြည်နူးဖွယ် ရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဇနီး အာဗြဲစိန်ကလည်း မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပိုမိုအောင်မြင်အောင် ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် လျက် ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Live Sales တိုင်းလည်း ရောင်းမလောက်အောင် ဖြစ်ရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက လည်း သူတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုအမြဲစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က အာဗြဲစိန်ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် စိတ်မကောင်းစရာအကြောင်းလေးတစ်ခု ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်တုန်းက အမှတ်တရဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် … Read more